TOP 100 Quotes Life for 2020 - Quotes Pedia
115 xigasho iyo odhaah
Dad badani waxay sii wadaan tirinta tirada sano ee ay ku nool yihiin, laakiin taasi ma aha jidkii. Waa muhiim in Hubso inaad ku noolaato sannadahaas waana inaad hubisaa inuu jiro nolol ku filan sannadahaas aad ku nooshahay oo dhan.
Waqtiyada qaarkood, waxaan marqaati u nahay wax badan oo hoos u dhac nolosheena ah oo aan joojineyno aragtida dhinaca wanaagsan ee waxyaabahaas. Dabcan, waxyaabah dhici maayaan hadba sida aad rabto marwalba, laakiin waa inaadan u oggolaan in waxyaabahaas foosha xun ay ku baabi'iyaan jiritaankaaga gudahaaga.
Waxaa jiri kara waqtiyo aad la kulmi doontid guuldarro laakiin taasi mar labaad waa hagaagsan tahay maxaa yeelay xilliyadaas xun waxaa lagu yaqaan inay ku siiyaan casharrada ugu wanaagsan noloshaada. Macnaha guud, waxaa muhiim ah inaad ka gudubto xigashooyinka nolosha maadaama ay kaa caawin doonaan inaad dib ugu soo laabato xiisahaas wanaagsan ee kugu dhex jira.
Muuqaallada noocaas ahi waxay kaa caawin doonaan inay ku soo dalacdo mar labaad si aad markale kor ugu kacdo oo aad u sameyso wax walba oo markii hore lagaa rabay inaad samayso.
Noloshu weligeed isku si isku mid ma noqon doontid. Nolosha, waxaad la kulmi doontaa dhowr xaaladood oo aan u dhicin sidii aad rabtid. Si kastaba ha noqotee, taasi waa hagaagsan tahay oo waxaad u baahan tahay inaad arrimaha sidii ugu habboon ula qabsato.
Waxkasta kuma dhici doonaan adiga sidaad uhesho, laakiin dhowr jeer ma dooran kartid. Waa caadi in la maro dhammaan dhacdooyinka nolosha maadaama ay ku siin doonaan casharro noloshaada ah. Khibradaada nolosha waxay kuxirantahay sidaad wax ugaqabatid arimaha kugu soo dhaca.
Haddii aad caqli badan tahay, ma qabsan doontid waxyaabo aan noloshaada wax badan ka tarin. Dhanka kale, waa inaad had iyo jeer aamintaa aruurinta khibradahaaga dhacdooyinka nolosha ka dibna isku darista barashadaas mustaqbalkaaga.
Xilliyada xun ayaa adiga ku siiya casharada ugu fiican noloshaada, waana wax aad u badan si aad uga hesho inta badan casharrada noloshaada dhacdooyinkaas. Kuwani xigashooyinka nolosha wuxuu had iyo jeer kaa caawin doonaa inaad dib u hesho dhiirrigelintaas aad u badan tahay inaad lumiso intaad ku dhex marayso caqabadaha noloshaada.
Dabcan, waxay muhiim u yihiin inay hubiyaan inaad mar labaad ku buuxsanayso tamar. Sidoo kale, waxay kuu diyaarinayaan inaad diyaar u ahaato si aad u awood ugu yeelato inaad la kulanto dhibaatooyinka oo dhan ee weli kugu soo dhacaya jidkaaga.
Ugudambeyn, maahan sanadihii noloshaada in la xisaabiyo. Waa nolosha sannadahaaga. - Abraham Lincoln
Waxaan da 'ahaan ugu tirinaa da'deena sannado, miyaanay ahayn? Weligaa miyaad ka fikirtay haddii taasi dhab ahaan tahay jidka…
Inbadan oo aad ammaaneyso oo aad u dabaaldegto noloshaada, ayaa waxa sii badanaya nolosha in loo dabaaldego. - Oprah Winfrey
Noloshu waa duco dhammaanteen. Waa safar aan caadi aheyn oo leh qaybtiisa…
Haddii aad rabto inaad noloshaada ugu noolaato si farxad leh, ha ka fikirin da'daada. Waa inaad tixgelisaa…
Markaad qoreyso sheekada noloshaada, ha u oggolaan qof kale inuu qalinka hayo. - Harley Davidson
Noloshu waa qaali. Waa muhiim inaan ka faa'iideysano wax kasta oo ka mid ah. Korodhka iyo hoos udhaca, waxaan…
Waxay leedahay guul darrooyinku waa qayb muhiim ah oo nolosheenna ah sababta oo ah waxay uun noo qaabeeyaan…
Meel alla meeshii aad nolosha ku beero, ubaxu nimco. - Maahmaahdii Hore ee Faransiiska
Waligaa ha joojin waxbarashada, maxaa yeelay noloshu waligeed ma joojiso barashada. - Lama yaqaan
Macallinka ugu weyn ee aad waligaa lahaan lahayd waa noloshaada! Aqoontu waxay ka imaan kartaa meelkasta iyo meelwalba. …
Jeclow nolosha aad ku nooshahay. Nolosha aad jeceshahay. - Bob Marley
Noloshu waa duco waana inaan ku mahadnaqno daqiiqad kasta oo dhaaftay. Waxay noo furaysaa…
Xulasho adag, nolol fudud. Xulasho fudud, nolosha adag. - Jerzy Gregorek
Doorashooyin adag, nolol fudud! Haa, mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad ku qasbanaato inaad sameyso xulashooyin adag noloshaada, laakiin…
Ma helaysid nolosha farxadda leh. Waad sameysaa. - Camilla Eyring Kimball
Farxad waa shey aad ku heli doontid waxyaabaha ugu yar. Iyo si loo helo farxad, adiga…
Waqtiyada adagi na barayaan casharro qiimo leh. - Lama yaqaan
Waxaa jira waqtiyo nolosheena ah markii aan dareemno niyadjab; waxaan dareemeynaa hoos u dhac. Waqti ayaa jira…
Beddel aragtidaada waxayna baddali doontaa noloshaada. - Lama yaqaan
Kala badh sababahaaga guuldarada waa sababta oo ah sidaad u aragto noloshaada. Waxaad u baahan tahay inaad beddesho…
Noloshu waxay noqotaa qurux marka aad barato inaad naftaada u fiicnaato sida aad dadka kale u tahay. - Qarsoodi
Is-jacaylku waa shay muhiim ah laakiin badanaaba waan iska indhatirnaa iyada oo aan ku sii wadno sii wadidda xiriirro kala duwan…
Ujeeddadeyda nolosha ma ahan kaliya inaan noolaado, laakiin waa inaan barwaaqo. - Maya Angelou
Hagaag, inteena badan waxaan door bidaa inaan ku noolaano waayo-aragnimo dib-u-dhac ah. Waxaan qabnaa in lagu noolaado nolol nabad ah…
Haddii aad eegto waxa aad nolosha ku leedahay, marwalba waad helaysaa intaa. - Oprah Winfrey
Noloshu waa macalinka ugu fiican ee aad heli doontid. Wax kale oo aan ahayn nolosha ayaa ku bari doona sida ugu badan…
Maaha waxa aan nolosheenna ku leenahay, laakiin cidda aan nolosheenna ku leenahay ayaa tirinaya. - JM Laurence
Haddii aad noloshaada barbardhigto waxa aad adigu leedahay iyo dadka aad la wadaagto -…
Noqo mid xoog leh oo qosol nolosha, in kasta oo ay mararka qaarkood dhaawacdo. - Lama yaqaan
Noqoshada firfircoonaanta iyo xoogga nolosha waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu noolaado. Hadaadan ahayn…
Ha u oggolaan in wixii aad soo dhaafay dileyso mustaqbalkaaga. - Lama yaqaan
Dhamaanteen waxaan leenahay sheekooyin nolosheena u gaar ah. Waxaa jira shaqo badan oo adag oo ay qaadatay in ay noqoto…
Markay noloshu sii adkaato, iskuday naftaada inaad xoog yeesho. - Lama yaqaan
Noloshu waxay ku saabsan tahay ka gudbidda caqabadaha maalin walba. Caqabadahaani waa wax aan ahayn caqabadaha iyo caqabadaha…
Wixii ku dhibaya maanta waxay kaa dhigeysaa mid adag berri. - Lama yaqaan
Weligaa wax ma baran kartid adigoo ku sii jira aagga raaxadaada. Waad baran kartaa markii aad…